Indonesia in Focus: Kasị mmasị njem nleta ebe ke Indonesia.
Kasị mmasị njem nleta ebe ke Indonesia.
The na-agba ịnyịnya na-okokụre (377)
(Part narị atọ na iri asaa na asaa), Depok, West Java, Indonesia, September 27, 2015, 1:32 pm).
Na mgbakwunye na n'àgwàetiti Bali, Indonesia yiri ka amara nke mara mma njem nleta na saịtị na ọbụna ọtụtụ ihe ndị ọzọ mara mma ma na nnọọ uru ileta na dịghị mgbe a ga-echefu maka njem nleta na-mgbe gara, n'etiti ndị ọzọ:
Marine Park Raja Ampat, Papua N'ihi na divers na ndị hụrụ nke mmiri n'okpuru osimiri ụwa ogige, bụ a mmiri paradise nke na-akụ na ụba nke mmiri ndụ bụ ịtụnanya. Otu n'ime ndị kasị ama nkiri Raja Ampat mmiri ogige. A na ebe a kwuru na dị ka Coral Reef Paradise ma ọ bụ na paradaịs nke coral kpụkọtara ọnụ site divers nke ụwa. Ọnọdụ Adọrọ Mmasị Raja Ampat mmiri ogige-emi odude ke West Papua.
Raja Ampat bụ ọhụrụ district nke nkewa wilaya district obosara slide na 4.6 nde hectare. Mkpokọta 85% nke ngụkọta ebe nke oké osimiri, mgbe ndị fọdụrụnụ bụ otu ìgwè nke agwaetiti na coral atolls ụfọdụ 610 isuo. Nke ọtụtụ narị agwaetiti okporo ahịhịa amị nanị 35 agwaetiti na-bi amaala ndị mmadụ.
Raja Ampat Islands na-abụghị nanị weere dị ka ihe na Nature Indonesia n'ụdị ndị kasị ibu mmiri Park ke Indonesia, kamakwa kwenyere na ha nwere a akụ na ụba nke mmiri ndụ n'ụwa. Ekpughe panoramic Adọrọ Mmasị Raja Ampat mmiri ogige malitere mgbe a Dutch mba ukwu-adanye na mmiri aha ya bụ Maxx Ammer gara n'ógbè na 1990.
Adọrọ Mmasị Raja Ampat mmiri ogige bụ otu ebe coral kpụkọtara ọnụ na a akụ na ụba nke mmiri ndụ n'ụwa, nwere ọ dịkarịa ala 1300 ụdị azụ, 600 ụdị coral na 700 ụdị mọsel, ọ bụghị banyere ihe dị iche iche ụdị nke turtles, algae na azundika jelii. The kasị ukwuu akụ na ụba n'ụwa nile coral triangle ebe, ya bụ na Philippines, Indonesia, na Papua New Guinea.
Nyere obosara nke aquatic nkiri Papua Raja Ampat mmiri Park na a ọgaranya dịgasị iche iche nke mmiri ndụ, ahụ ị nwere ike họrọ a mgbe na-amalite amaba. Gburugburu n'àgwàetiti Kri, ị pụrụ ịhụ mma nke coral kpụkọtara ọnụ na ọtụtụ ụdị nke azụ nke bụ ịtụnanya, gụnyere ụdị nke Queensland grouper, pompano, snapper, grouper, alaiyi umu azu shark, tuna, napoeleon wrasse, barracuda, na ibu trevelly.
Ndị ọzọ amaba tụrụ Marine Park Adọrọ Mmasị Raja Ampat Papua bụ na azu Reef na a omimi nke banyere 10 mita. Ebe a na-eje ozi a dịgasị iche iche nke azụ gụnyere parrotfish nke nwere amamiihe agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị sensashion nke ịbụ na oké nkume ọwara, ị nwere ike amaba gburugburu agwaetiti Kaboei Bay Rock. E nwere a Cove n'okpuru a nkume ọwara. Kaboei Bay Rock chọpụtara coral abaitiat bi ụsụ Adanlodu Ole, na n'ebe ụfọdụ na-achọta foduru nke mmadụ ọkpụkpụ.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ amaba tụrụ Adọrọ Mmasị Papua Raja Ampat Marine Park ị nwere ike inyocha, dị ka The Mpaghara akwukwo, Fam Island, na n'àgwàetiti Misool. E wezụga na-anụ ụtọ akụ na ụba nke mmiri ndụ, ị nwekwara ike na-enweta akụkọ ihe mere eme na saịtị n'okpuru oké osimiri, gụnyere warships na ọgụ ụgbọelu na-kpuo na mmiri Adọrọ Mmasị Papua Raja Ampat mmiri ogige. Ọ bụghị nanị na, ị nwekwara ike-enwe mma nke agwaetiti mpaghara Adọrọ Mmasị Papua Raja Ampat mmiri ogige na a steeti pristine, laguunu, na n'ọnụ mmiri ka na-echebe, nwere a gbatia nke pụtara osimiri na kristal doro anya oké osimiri mmiri.
I nwere mmasị na-eleta na-adọrọ mmasị Papua Raja Ampat mmiri ogige nwere ike si Jakarta ma ọ bụ ndị ọzọ nnukwu obodo ndị Domine Eduard Osok, Sorong, West Papua. Flights si Jakarta ka Sorong-emekarị n'ụzọ na Makassar ma ọ bụ Manado. Site Domine Eduard Osok, ị nwere ike ozugbo gaba nkiri Raja Ampat mmiri ogige na ụyọkọ ngwa ngwa ụgbọ mmiri berkafasitas mmadụ 10 a na-eri nke mkpokọta USD 3.2 nde ọ bụla ụzọ maka 4 awa.
Ọ dịghị pụrụ iche tiketi ịbanye mmiri ebe nkiri Raja Ampat mmiri ogige. Otú ọ dị, ndị na-eri ịgbazite moto ụgbọ mmiri, akụrụngwa divers na ndị nkụzi sitere na site ọtụtụ narị puku ọtụtụ nde rupiah ke kiet ke otu amaba. Mmiri usoro a na-emekarị rụrụ ọtụtụ ugboro na-enweta amaba tụrụ dị iche iche. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe di iche iche enubakwa na-ebelata ego nke mmefu nke bụ dịtụ ọnụ.
Regional nkiri Papua Raja Ampat mmiri ogige, ị pụrụ inweta zuru ezu ụlọ ọrụ adị na ụfọdụ ntụrụndụ, dị ka n'àgwàetiti Kri, Waigeo, Mansuar, na Misool. Ụfọdụ ntụrụndụ ịtọ price dịtụ oké ọnụ n'ihi na ọ ọnọde a zuru ezu owuwu. Ọ bụrụ na ị na-abịa na a ala mmefu ego, ndị ọchịchị-ekesịpde resotu nwere ike ịbụ otu nhọrọ.
Ọzọ ọzọ na-enwe na-adọrọ mmasị Papua Raja Ampat mmiri ogige bụ site n'ịhọrọ anọ na ụgbọ mmiri ahụ na goro ụgbọ mmiri Pinisi nke e gbanwetụrụ kpọmkwem maka mmiri na-eme ụbọchị ole na ole. Ụgbọ mmiri ahụ nwere kafasitas kacha nke 14 ndị a na-eri nke banyere 90 nde 110 nde maka a nrughari ruo otu izu.
Mmiri n'okpuru osimiri paradise
Dị ka otu n'ime ndị mbụ mmiri ogige n'ụwa, ịma mma nke mmiri n'okpuru osimiri ụwa nke Bunaken, Manado North Sulawesi na-ọma mara na mba obodo, karịsịa maka Ndi oru ime mmiri di iche iche. N'ezie, na 2005, Bunaken aghọwo a ụwa nketa saịtị mgbe Indonesian ọchịchị ka aha Bunaken ka UNESCO. Na-ebe nke mkpokọta 75 625 hectare, mmiri enthusiasts na-Mkpughe site ọtụtụ amaba ntụpọ. Bunaken Marine Park nwere a 20 mgbe amaba ntụpọ, 12 nke ndị na-n'àgwàetiti Bunaken. Number nke amaba tụrụ pụrụ dịkwuo tinyere na ọnụ ọgụgụ nke divers ịgagharị mmiri n'okpuru osimiri mma nke Bunaken.
Nke 20 mgbe amaba ntụpọ, ndị kasị mmasị n'etiti ndị ọzọ nọ Home Village, Lekuan, Fukui Point, Mandolin ponit na East Bunaken. The divers onye ugboro ugboro gaa na Bunaken amaba ntụpọ nwere dị iche iche ọkacha mmasị. Ka ihe atụ,-adanye na mmiri na-enwe mmasị na-amaba ntụpọ umu azu shark nwere dị iche iche mmasị na divers na-n'anya-achọ Manta ụzarị. Mmiri n'okpuru osimiri foto obi ụtọ na-achọ seahorses, flamboyant cuttlefish, na ndị ọzọ nnukwu foto akpọkwa na-adị n'okpuru oké osimiri.
Larịị nke visibiliti na mmiri esịmde 20 mita, mgbe ụfọdụ, mgbe m na-ezi larịị nke visibiliti nwere ike iru 35 mita. Ị pụrụ ịhụ mma nke coral kpụkọtara ọnụ nke Bunaken Marine Park, nke bụ otu n'ime ndị kasị mma na ụwa. E nwere ihe dị 390 umu nke yi coral alaiyi na-ịtụnanya. Berlekak-nkụkpọ pụrụ iche udi na cracks ruo obere n'ọgba ma ọ bụ ọwara n'okpuru oké osimiri nke na ghara ịchọta ebe ndị ọzọ.
Derawan agwaetiti emi odude ke akipelago nke Derawan, Derawan distrikti, ógbè Berau, North Borneo, unit Derawan agwaetiti morphology bụ bertopografi ewepụghị ala gbara osimiri okirikiri dị larịị. Ájá osimiri nwere a ná mkpọda nke banyere 7 Celsius - 11 Celsius na a obosara nke 13.5 20 mita.
Na gburugburu mmiri bụ a mmiri ogige ma ama dị ka njem nleta mmiri (mmiri) na a omimi nke ihe ise mita. E a dịgasị iche iche nke mmiri ndụ n'ebe a, dị ka skwid (cuttlefish), lobsters, azụ anwụrụ (ghostpipe azụ), octopus (bluering octopus), nudibranchs, oké osimiri ịnyịnya (seahorses), eel rịbọn (rịbọn eels) na azụ skorpion (Scorpionfishes ).
On a Oké Nkume na a omimi nke iri mita, e nwere alaiyi maara dị ka "-acha anụnụ anụnụ mgbidi triga" n'ihi na alaiyi na a ogologo 18 mita bụ a otutu triga azụ (red-toothed triga azụ).
Derawan bụ agwaetiti na oké osimiri na-acha shades nke acha anụnụ anụnụ na green echiche, ájá ọcha adụ, e nyere ahịrị nkwụ na n'ụsọ oké osimiri, na obere ọhịa na n'etiti nke agwaetiti nke bụ ebe obibi nke iche iche na umu nke osisi na ụmụ anụmanụ na eke mma nke ala breathtaking oké osimiri. Adịghị anya ma ọ bụrụ a agwaetiti nwere ike elu n'ohu atọ dị ka a ụwa na klas mmiri ebe na-eme ka a agwaetiti a nrọ n'àgwàetiti ahụ n'ihi divers.
Gburugburu agwaetiti Derawan, dị ka ọtụtụ dị ka 28 mgbe amaba Achoputala. Inyocha niile a dịkarịa ala ọ na-ewe banyere 10 ụbọchị na otu amaba na onye ọ bụla na-ekwu. Ịkwaga si otu isi ọzọ, ọbịa nwere ike iji ụgbọ mmiri. Ka ọ dịgodị, ndị ọbịa nwekwara ike inyocha agwaetiti na ụkwụ.
Dr. Carden Wallace nke ebe okpomọkụ ngosi nka Queensland, Australia ka nyochara mmiri akụ na ụba nke agwaetiti Derawan na hụrụ ihe karịrị 50 iche iche nke arcropora (mmiri ụmụ anụmanụ) na a coral alaiyi. Ọ dịghị onye yiri ma ọ bụrụ na Derawan àgwàetiti ahụ bụ ma ama dị ka nke atọ kasị elu na ụwa dị ka ihe mba amaba ebe.
Coral kpụkọtara ọnụ na akipelago nke Derawan zuru ebe nile na agwaetiti ahụ dum na ọgbaa ọkụ na Derawan akipelago. Hirst-footed na n'àgwàetiti ndị a na-agụnye Long Island ọgbaa ọkụ, chanwụrụ masimbung, ọgbaa ọkụ buliulin, pinaka ọgbaa ọkụ, chanwụrụ na ọgbaa ọkụ tababinga muaras.
Reef ụdị na Derawan akipelago mejupụtara fringing, mgbochi kpụkọtara ọnụ na atolls. Nke a Atoll na e hiwere n'ime àgwàetiti ahụ na hiwere n'ime a saltwater ọdọ. "Manta ikpu nnyocha e mere na 2003" na-egosi na nkezi cover nke coral kpụkọtara ọnụ na ogologo àgwàetiti ahụ bụ 24,25% na 34,88 maka ike nkume kọral na alaiyi ndụ. Coral kpụkọtara ọnụ na agwaetiti Derawan nwere nkezi coral cover nke ike ruby ​​17,41% na 27,78% ndụ coral cover. Na ọnụ ọgụgụ nke umu 460 ka 470-atụ aro na a ga-a akụ na ụba nke biodiversity abụọ mgbe Raja Ampat akipelago.
Coral Reef isi ebe:
ogologo nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke agwaetiti (mmiri na ọwa)
muaras na a elu di iche iche nke coral, coral ike na aesthetic uru
malalungun coral, di iche iche na a mgbagwoju Ọdịdị na a dịgasị iche iche nke ebe
nnukwu coral-ọgaranya ebe
Reef azụ nnyocha e mere na 2003 gosiri na a agwaetiti na-amị 832 umu. Ke adianade do, ọ na-eme atụmatụ na e nwere dịkarịa ala 1.051 umu ke mmiri Berau na gobes kasị umu (Gobiidae), wrasses (Labridae), na damselfishes (Pomacentridae).
Mgbe ụfọdụ mgbe ọ nọ ọdụ n'ụlọ njedebe nke osisi akwa na-eduga ná oké osimiri, anyị pụrụ ịhụ green turtles na-efegharị efegharị n'elu nke doro anya mmiri. Mgbe mmiri anyị na-na-eso turtles na igwu mmiri gbara anyị gburugburu. Mgbe ụfọdụ ọbụna turtles ndị yiri ka hà na-akpagharị gburugburu obi na-emi odude na n'ụsọ oké osimiri nke agwaetiti ahụ. Na n'uhuruchi, ụfọdụ turtles rigoro mbenesụk na dina àkwá ha n'ebe ahụ.
Ọbịa nwekwara ike nyochaa n'àgwàetiti ndị ọzọ gburugburu Derawan. Ka ihe atụ: Charitable Island, Maratua, na kakaban agwaetiti na nwere ya iche. Blue stingray (Manta ụzarị) nke ruru 3.5 mita obosara bi n'àgwàetiti Charitable. N'ezie, pụkwara ịchọta-ma ọ bụrụ na kechioma, nwa stingray na mbara "wingspan" 6 mita. Ezie na agwaetiti nwere a pụrụ iche kakaban n'ụdị a prehistoric ọdọ ke n'etiti oké osimiri, naanị onye na Asia.
Ahụkarị ma na-echebe umu na pụrụ ịchọta n'etiti aki oyibo crabs (Birgus latro), whales, Dolphins (Delphinus), green mbe (Chelonia mydas), hawksbill (erethmochelys fimbriata), na dugong (Dugong dugon). Aki oyibo crabs pụrụ ịchọta n'àgwàetiti kakaban na Maratua. Pope pụrụ ịchọta gburugburu agwaetiti Maratua na a akpan akpan oge, mgbe Dolphins gburugburu agwaetiti Semama, Charitable, kakaban, Maratua, na ọgbaa ọkụ muaras.
Mbe pụrụ ịchọta gburugburu Long Island, Derawan, Semama, Charitable na Maratua na dugongs na Long Island na Semama. Ọzọ pụrụ iche na umu nke Manta ụzarị (Manta birostris) emi odude ke Isuo Charitable na pigmy seahorse n'àgwàetiti Semama na Derawan.
Ụlọ ọrụ na Ulo
Derawan nye ụlọ ọrụ dị ka cottages, amaba gia, speedboats ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Derawan Àgwàetiti ahụ nwekwara inye ulo na-adịghị oke ọnụ nke a na-jisiri site obodo.
Ndị a ụlọ ndị dị mfe juts fọrọ nke nta 100 mita n'ime oké osimiri iji mee ka ndị bi nwere ike kpamkpam ịhụ a dịgasị iche iche nke yi azụ na turtles agafe kpamkpam na-enweghị na-enye nsogbu onye ọ bụla. The nri menu dị nnọọ mfe na a kasị isi menu nke oké osimiri azụ na nri mkpọ na-adịghị ekwu si ụtọ ikuku ehihie na abalị a agwaetiti.
Na-esi na agwaetiti Derawan, ndị njem nleta ike ofufe n'ihi na mkpokọta 3 awa Balikpapan, East Kalimantan, site ụgbọelu si Jakarta, Surabaya, Yogyakarta ma ọ bụ Denpasar.
Site Aberdeen, ka nwere fega Cape Redeb amaba otu awa site ụgbọelu, Na na Star, Deraya ma ọ bụ das. Ke adianade do, Cape Redeb nwekwara ike ruru site oké osimiri, na abanye si Samarinda, isi obodo nke East Kalimantan Tarakan, isi obodo nke North Borneo ka Cape Redeb sochiri renting a ụgbọ mmiri.
Njem n'àgwàetiti Lombok.
Lombok, West Nusa Tenggara (bi na 2001: 2.722.123 bi) bụ agwaetiti na Lesser Sunda Islands ma ọ bụ Nusa Tenggara na-iche site Lombok Strait nke Bali na Sebelat Ewoo Strait n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Sumbawa. Agwaetiti bụ mkpokọta * Tụkwasị na a ụdị "ọdụ" na ndịda ọdịda anyanwụ n'akụkụ nke a ogologo nke mkpokọta 70 km. A agwaetiti ebe eru 5.435 km², ịtụkwasị ya kwubara 108 nke ndepụta nke agwaetiti dabeere na ruo n'ókè nke ụwa. Isi obodo na àgwàetiti ahụ bụ Mataram.
Lombok Island bụ ama n'ihi na ya eke mara mma nke osisi na-adọrọ mmasị. Lombok agwaetiti bụghị nanị nwere atọ Gili isuo. Na mgbakwunye na Gili Trawangan, Gili Ikuku na Gili Meno. Lombok agwaetiti ka nwere ụfọdụ dyke dokwara mara mma. Otu naanị Gili Kondo emi odude n'ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti nke Lombok.
Lombok Island ugbu a ghọọ otu n'ime ndị akara ngosi nke Indonesian njem, ịma mma nke agwaetiti bụ nke abụọ ka onye na-Indonesia, ile ọbịa Sasak ndị mmadụ, ịma mma nke osimiri na dị nnọọ ọcha, coral kpụkọtara ọnụ na ndu richness ndị pụrụ iche na, ịma mma nke Ugwu Rinjani na omenala iche Sasak ọtụtụ agwa mmasi anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị njem nleta.
Mma nke agwaetiti Lombok na eksotismenya ga na-agba gị na onye gị na maka a honiimuunu ebe a. N'otu aka ahụ na Exotisme Gilis Island ga-agba gị ka ị-enwe mma nke agwaetiti ahụ.
A agwaetiti bụ otu n'ime abụọ kasị agwaetiti ekesịpde site na Province nke West Nusa Tenggara. Mma nke odida obodo, na-eme n'àgwàetiti Lombok ịbụ otu honiimuunu ebe bụ nke na-achọsi ike. Mgbe i nwere mara ebe ụkwụ ga-steepụ, ịma mma nke Lombok nwere ike enyoba on na njem a.
Na osimiri mara mma kpokọtara, ebube Mt Rinjani ma ikpọ mmiri na-achọpụta ya, nke àgwàetiti Lombok na West Nusa Tenggara nwere ọtụtụ njem nleta na ebe ma na ala na oké osimiri. Sịkwa mgbe ahụ ka bụ ihe kasị ewu ewu na ebe na West Nusa Tenggara.
Dị nnọọ gaa ebe a na-eche na surf nnukwu mmiri na ebili mmiri na ndịda n'ụsọ oké osimiri. Aka gị ikike idi ịrị n'elu nke ugwu mgbawa. Iku a igwe kwụ otu ebe na a ọgba tum tum na-gburugburu na n'okporo ámá tinyere paddy ubi. Ọ bụla ị chọrọ meghabiskan oge, ị ga-enwe mmechu ihu na ikpọ eke mara mma ebe a.
Ndị ọzọ ọbịa ka Lombok ahọrọ eji oge ha n'àgwàetiti Gili-Gili, a zoro ezo okpomọkụ àgwàetiti osimiri bụ ebube na dara oké ọnụ gburugburu.
The mbụ bi Lombok bụ Sasak, Lombok bụkwa obibi na Hindu ndị Bali na kwa a ọnụ ọgụgụ nke Chinese, Javanese, Bugis na Arab.
Ụfọdụ ndị na-Sasak nakweere Islam na okwukwe Wektu telu didefinisikann dị ka "Islam ugboro atọ" na-ezo aka ekpere ha ugboro atọ n'ụbọchị na dị iche iche na ndị Alakụba na ndị na-ekpe ekpere 5 ugboro n'ụbọchị. Wektu telu bụ a pụrụ iche okpukpe na incorporates oge ochie omenala na islam nkwenkwe, nkwenkwe na-hụrụ naanị na North Lombok. Ndị na-ata nkwenkwe a bụ ndị Alakụba ma n'otu oge ata omenala ememe. Ihe Nlereanya dị ka Nyiu ememe ẹkenịmde ke otu narị ụbọchị mmadụ nwụrụ. Ezinụlọ nke ndị nwụrụ onyinye dị ka uwe, toothbrushes na nri mere na onye ahụ nwụrụ anwụ ga-anọ jụụ n'eluigwe.
Okpukpe ndị ọzọ na-eme ememme na-eme ememe na mmalite nke ezo oge (October ka December) ma ọ bụ oge owuwe ihe ubi (April-May) na ememe n'ime obodo n'àgwàetiti ahụ niile.
Sasak omenala dị ezigbo mkpa maka ike na nke anụ ahụ nkà na a otutu omenala obodo mereflesika a omenala. Peresehan bụ a Obodo ọdịnala na-agwakọta agha n'etiti ndị ikom abụọ na-eji ogologo okpete na obere ọta ekara onu bujung nke cowhide.
Music na egwú ndị dị oké mkpa na Sasak omenala. Egwú n'ihu ndị ọbịa a omenala agba egwú n'oge mkpa nme. Nke a na-agba egwú sitere agha na-agba egwú, dị ka Beleq drum (nnukwu drum) ruo mgbe Cupak Gerantang ewu ewu na-agwa akụkọ nke ịhụnanya na romance.
Gaa Leta pụrụ iche Pura Lingsar, a Nchikota Balinese Hindu ụlọ nsọ, na nkwenkwe Wektu telu ke kiet ke otu mgbagwoju.
Na na shopped na ahịa Surandi obodo skyline. E nwere ụfọdụ ọmarịcha picnic tụrụ iji zuru ike na zuru ike.
Nwalee gị chi na a nleta ruo ama ịgba ọsọ na ubi Salakalas. The agbụrụ ẹkenịmde ọ bụla Sunday. Na-ekiri ndị na-eto eto jockeys na a uko mpi ruo n'isi akara ebe eto eto ga-memberika ọnụ ọchị Victor. N'ọsọ a dị ezigbo mkpa otú n'abali tupu agbụrụ, ndị obodo ga-ịhịa aka n'ahụ ịnyịnya ha, na mgbe ụfọdụ na arụ orụ gamelan music iji mee ka obi ịnyịnya.
Aka gị ikike idi ịrị elu nke Ugwu Rinjani. N'ebe ịdị elu nke n'elu 3.700 mita n'elu oké osimiri larịị, nke a ebube mgbawa ugwu rịa ugwu ga-dịkarịa ala ụbọchị atọ na-adịghị aro ka ndị na obi ọrịa. Ozugbo ọnụ ọnụ nke ike ọgwụgwụ ị ga-akwụ ụgwọ site eke odida obodo Indonesia ịrịba ama.
Na-eche na ájá na ọbụ ụkwụ unu na igwu mmiri na sachaa ala gbara osimiri okirikiri mmiri na South Kuta Lombok. White ájá na ikpọ oké osimiri echiche ebe a ka ebe a dị ka njem nleta na-aga na mbụ curved. Gaa Leta Nyale Azu Kuta n'oge kwa afọ ememme, na-emekarị ẹkenịmde ke February ma ọ bụ March na-enwe ememe na edikan na agba.
Sunbathing na sọọfụ on mara mma osimiri nke Batu Bolong. Ụsọ oké osimiri a na-ewe ya aha si nnukwu nkume na oghere n'etiti. Jide n'aka na ị na-eche unusually mara mma anyanwụ dara mgbe anyanwụ malitere imi na Ugwu Agung Bali na-echeghị na enwu enwu agba.
Mụta banyere obodo akụkọ ihe mere eme ma na-eleta Meruya Mmiri Obí na Mataram, isi obodo Lombok. Ebe a e wuru na 1744 na gara aga bu a ọbara agha n'etiti Netherlands na ndị bi na Bali ke mbubreyo narị afọ nke 19.
-Enweta ịdị jụụ nke ndị kasị ibu temple Lombok, Pura Meru, emi odude n'azụ Mmiri Park. The temple, nke na ọtụtụ narị afọ e raara nye Hindu Trimurti nke Brahma, Vhisnu, na Shiva.
Ọnọdụ ka njem ụgbọelu nwere ike iwere si Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bali, obodo nke na Mataram.
City nke Bukittinggi, West Sumatra bụ akụkọ ihe mere obodo, obodo omumu nke atọ oké dike nke Indonesia, na kwa a obodo a maa mma njem nleta exoticism. Bukittingggi nwere niile ibiere ịghọ onye njem nleta zaa nke ndị ọbịa. Na obodo mere ka December 17 dị ka ụbọchị ncheta nke a, e bụ Elekere Tower nke bụ a ịrịba ama nke obodo, a relic nke colonial akụkọ ihe mere eme na ngosi ihe mgbe ochie Minangkabau omenala na Bung Hatta Obí.
Administratively Bukittinggi amalitelarị etolite na Dutch colonial oge. Dutch mere Bukittinggi dị ka Gemeentelijk Resort ma ọ bụ ụfọdụ municipalities dabeere Gazette na 1828 tinyere 32 ọzọ Gemeentelijk Resort na Indonesia. A ọnọdụ na-eme ka Bukittinggi mgbe ọ na ugbua nwere Gemeenteroad ma ọ bụ kwurula ọchịchị nke ọtụtụ ga-achịkwa site Dutch. Na Singapore nwekwara guzobere ebe e wusiri ike aha ya bụ "Fort De Kock". The nkera bụ ka emebibeghị na-eje ozi dị ka otu n'ime nkiri nke akụkọ ihe mere eme. Obodo a na-eji site Dutch isi, bụ ndị nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ chịrị izu ike.
N'oge Japanese akaọrụ, Bukittinggi renamed si Fort de Kock Taddsgemente ịbụ Bukittinggi Iji Yaku Sho na mgbakwunye na nke ihe ugbu a Agam District. Japan nwekwara guzobere a redio transmitter kasị n'àgwàetiti Sumatra n'ihi okwu nduhie. Ọzọkwa dị ka obodo ọchịchị, Japan-emekwa ka Singapore dị ka 25th agha iwu maka akara ndị agha na Sumatra, Singapore ka Thailand.
Mgbe Indonesia onwe, Bukittinggi mgbe eje ozi dị ka Central nzere mgba maka onwe. Ọbụna December 1948 ruo mgbe June 1949, London e ji mee dị ka isi obodo nke Emergency Government nke Republic nke Indonesia (PDRI) edu Mr. Sjafroedin Prawiranegara. Mkpebi e nyere site na President mgbe Yogyakarta daba n'aka nke Netherlands dị ka a n'ihi nke agha na-awakpo mba II. Mgbe ahụ Bukittingti họpụtara dị ka isi obodo nke Sumatra, na 1959 mere isi obodo nke Central Sumatra. Mgbe mmepe nke West Sumatra, Bukittinggi eje ozi dị ka isi obodo nke West Sumatra tupu ke akpatre ke 1978 e zigara obodo Padang.
Bukittinggi sara mbara-apụghị iru gburugburu 250.239 km2 esịnede ugwu na ndagwurugwu. The ugwu nta na-dị na New York City bụ usoro nke ugwu agbụ belt. Na n'akụkụ nke ugwu, obodo a na-gbara gburugburu tida ugwu bụ Ugwu Merapi, Ugwu Singgalang, na Ugwu Sago. Ịdị adị nke atọ ugwu bụ ya mere New York City na-mara dị ka City Tri Arga. Nhazi Obodo ọnọdụ Bukittinggi ugwu ugwu na e n'elu 900 m asl (n'elu oké osimiri larịị), na-eme na ikuku na New York City na jụụ.
Tourism nwere nke Bukittinggi, West Sumatra na ngụkọta oge nke obodo ọchịchị, gua fọrọ nke nta 30% nke ngụkọta revenue (Regional Original Revenue). Ọ bụ na-abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ikike nke njem n'obodo dịtụ zuru ezu. Nature njem Bukittinggi ihe-akwado site na ọnụnọ nke ugwu nta na gburugburu obodo ahụ. Ahụkarị ikuku nke ugwu na jụụ ikuku na-eme ka Bukittinggi nwere ike ịbụ a nchegbu ntọhapụ maka njem nleta. Green mbara nke odida obodo nke ugwu dịkwa nnọọ adabara foto ndị hụrụ zaa. Mma nke anya ike ga-eri mgbe ndị bịara nleta nọ na ndagwurugwu obodo.
Dị ka otu n'ime emmepe nke Minangkabau omenala, Bukittinggi ugbu prototypes nke Minangkabau omenala. Omenala obibi, pakaiaan, asụsụ na-ahụkarị nri pụrụ ịchọta Bukittinggi. Fọrọ nke nta n'akụkụ ọ bụla, Bukittinggi ugbu gadang ụlọ ahụkarị Minangkabau omenala. The ụlọ na-neatly lined na buffalo mpi ekara n'elu ụlọ. Na ndị a ụlọ, ndị njem nleta nwekwara ike na-enweta carvings patterned Minangkabau depụtara na mgbidi ụlọ. Obodo ka na-eji omenala Minangkabau-adị kwa ụbọchị uwe.
Ikuku nke ụtụtụ ná obodo nke Bukittinggi na-echekwa pụrụ iche. Sunrice mma na-acha anụnụ anụnụ na mbara igwe ka ihere jikọtara na silhouette nke ugwu nta dị nnọọ adabara na-eji dị a ngosi. Dị otú ahụ nlegharị anya nwere ike ezubere iche si niile ntụziaka nke compass. N'abalị, karịsịa mgbe e a ememe, agba amụke ọkụ na ezimezi oku jupụtara ebe nile na obodo Bukittinggi.
Ọzọ mma na pụrụ ịchọta njem nleta na Bukittinggi-emi odude nso eke nkiri Sianok kaniyon. Anya Bukittinggi na Sianok kaniyon pụrụ ruru site n'ala nke mkpokọta awa atọ. Na ụzọ ọbịa nwekwara ike ịkwụsị site na-enweta nkiri nke Elekere Tower, a bastion Ford de Kock, nakwa dị ka abaitiat Japanese colonial nketa. Ghara ichefu, akụkụ ọzọ nke Bukittinggi bụ ụzọ nke ihe ka winding. Na Bukittinggi mara ma ọ bụ curved akuku 44 ampek iri abụọ ampek na-esi Lake Maninjau. Travelling gburugburu nkuku ga-enye ọzọ sensashion, karịsịa maka njem nleta na-n'anya ụgbọala.
City nke Bukittinggi bụ otu obodo dị na n'ógbè West Sumatra. Geographically, ọ na-emi odude ke 100,210 ka 100,250 degrees n'ebe ọwụwa anyanwụ lonjituudu na n'etiti 00 760 - 00,190 LS. Ọ bụrụ na ndị esiri nke West Sumatra isi obodo nke Padang, Bukittinggi na-emi odude odika 90 km ka Northeast.
Access obodo nke na London pụrụ ruru si ọtụtụ obodo na West Sumatra. Mgbe na-eji a Landline, ndị njem nleta nwere ike iji cross-Sumatra n'okporo ụzọ nke na-erukwa si Lampung ógbè na nad. Na-ajụ, maka njem nleta na-eji ikuku ụzọ, ndị njem nleta nwere ike iji n'ókè nke mgbasa na Padang maka inwekwu seeked Army. Dị ka ịga na dị iche iche na-adọrọ mmasị na Bukittinggi njem nleta nwere ike iji dị iche iche ụdịdị nke njem ọha na eze dị uniformly na Bukittinggi
E. Ulo na ndị ọzọ Facilities
Iji kwado njem oru bụ ugbu a na London e nwere 43 iberibe nke ma kpakpando na mmefu ego nkwari akụ gbakwunyere 11 mes / ọbịa n'ụlọ / obi. Ịdị adị nke ndị dị otú ahụ ulo bụkwa na-akwado ọrụ nke Singapore dị ka a n'ụlọ isi n'ihi na njem na West Sumatra n'ógbè.
Dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na London dị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, karịsịa na mpaghara, Los Lambuang. Na mpaghara ebe a, ọbịa nwere ike mebie ha uto buds na-ahụkarị nri Minangkabau. Ọ bụghị nnọọ site ebe Los Lambuang, na nso nkiri, ọtụtụ njem ụlọ ọrụ ndị na-adị njikere ijere ndị njem nleta njem. Ọkara metụtara na ncheta ịzụ ahịa, ebe nke Los Lambuang nakwa awade a dịgasị iche iche nke ihe ncheta na ncheta si Bukittinggi.
Ị maara na na Bandung ọtụtụ nkiri na ike ga-gara na-akpali nnọọ mmasị. Ya mere, oge ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-aga Bandung agbalị ịkwụsị site ẹdude Njem Nleta n'okpuru:
Njem Nleta nkiri na Bandung City:
Ọgụ na mgba Ncheta - JL. Dipatiukur
Agadi ogige - JL. Cisangkuy
Ịzụ ahịa Center JL. Cihampelas
Museum naa Indonesia - JL. Cisanggarung.
Museum nke Asia-African Conference
Square na Ukwu alakụba - JL. Asia Africa
Njem Nleta tụrụ na North Bandung:
Curug Dago - enweghị Ngwọta Dago
Forest Park Dago Pakar Cave na Netherlands / Japan
Curug Omas - Ogige Maribaya
Arena Azu Bonita - Lembang
Maka anya abuo Boscha Star - Lembang
Omenala Market - Lembang
Tii Ọkpọ Subang - West Java
Ifuru Ogige Cihideung - JL. Sagenti Bajuri
Mmụọ Camp; Sahabat Alam - JL. Sagenti Bajuri
Njem Nleta tụrụ na South Bandung:
Tii Ọkpọ Rancabali - Ciwidey
Tii Ọkpọ Gambung - Ciwidey
E Cipanunjang - PANGALENGAN
Na saịtị Gunungpadang - West Java
Ndagwurugwu Kamojang - Paseh West Java
Njem Nleta nkiri na Bandung West:
Akpụkpọ ụkwụ na akpa Cibaduyut center
Limestone ugwu nta - Padalarang
Esite Ciburuy - Padalarang
Pawon n'ọgba - West Java
Bụrụ abụ, sị Hyang Tikoro - West Java
Njem Nleta nkiri na East Bandung:
Nature Ugwu Manglayang
Cangkuang Temple na Kampung Pulo - Garut
Special Region nke Yogyakarta bụ isi na-eleta eleta Java, Indonesia, na otutu amara nke e kpughere.
A puku afọ gara aga, Yogyakarta bụ center nke oge ochie Mataram alaeze na-agaziri na nwere nnukwu mmepeanya. Alaeze a onye tọrọ ntọala ụlọ nsọ Borobudur bụ kasị Buddha temple n'ụwa, afọ 300 tupu Angkor Wat na Cambodia. Ọzọ relic temple Prambanan Temple, Istana Ratu Boko Obí, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ụlọ nsọ e weghachiri eweghachi ma ọ bụ na-ka lie n'okpuru ala (lee Wisata Candi).